UDI | Save A tareenka
Qoraa: jirka UDI
Guriga > jirka UDI
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo waayo-aragnimada New waa sabab wanaagsan u safraya. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar dalxiis-friendly hortiisa ah ma qaban kartaa shumac in batay shopping ah, iyadoo aan loo eegayn sida cajiib ah. Dadka u ciqaabayn shopping waxan u garan, oo nasiib wanaag waxaa jira magaalooyin badan oo Yurub ah oo ay ka soo saari karaan…
Kaas oo ah Tareenada ugu dheereeya Yurub iyo Caalamka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo tareenada Swiss yihiin kuwa ugu fiican Europe sida ay sheegtay Boston Consulting Group ee. First of dhan, Swiss ku gaari ratings sare inkastoo ay hoos u tayo. Swiss ayaa gaari a 7.2 guud rating baxay 10. halka Denmark, Finland, iyo Germany oo dhan gaari a 6+ qiimeynta. mida…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Midowga Yurub wuxuu soo jeediyay inuu maal galiyo in kabadan billion 100 bilyan oo tareen si sare loogu qaado safarada Yurub, maalgashiga Tani waxay la maalgelinta dawladda iyo kuwa gaarka ah ku dari doona. dhammaantiisba, maalgashiga guud badnaan doonaa billion € 4.5. maalgashiga waxay u iman doontaa iyada oo loo marayo kooxda maaliyad ah oo lagu magacaabo xiridda Facility Europe. Gudaha…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Safraya Europe tareen waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan, muuqaal dabiici ah, iyo safarada dhaqameed ee aduunka. Haddii aad raadinayso tareenada si toos ah u dhexeeya magaalooyinka Yurub ugu waaweyn sida London cusub ee tareenka Amsterdam ama aad raadinayso jireen sodcaalladoodii oo tareen taataabtay, tareenka Yurub…